Maxaa Ka Soo Kordhay Xaalada Dhaawacyadii Paul Pogba Iyo Phil Jones? Miyay Taam U Noqon Karaan Kulanka Newcastle United? - Laacib.net
Maxaa Ka Soo Kordhay Xaalada Dhaawacyadii Paul Pogba Iyo Phil Jones? Miyay Taam U Noqon Karaan Kulanka Newcastle United?
Tababaraha kooxda Manchester United ee Jose Mourinho ayaa doonayaa inuu dib u helo qaab ciyaareedka adeega xidiga ree France ee Paul Pogba sida ugu dhaqsaha badan, maadaama kooxda sida muuqata ay la dhibtooneyso maqnaanshiyahiisa xiliyadii lasoo dhaafay, inkastoo ciyaaryahanku uu qeyb kasoo noqday tababarka kooxda dhawaantan, hadana macalinka ree Portugal ayaa doonaya inuu kusoo darsado liiska xidigahiisa.
Wargeyska Telegraph ayaa daboolka ka qaaday in Paul Pogba uusan wali gaadhin heerkii uu diyaar ugu noqon lahaa in xiligan uu dib ugu soo laabto garoomada, taasoo ka dhigeysa inuu seegayo kulanka soo aadanee ay Man United maalinka Sabtida kula ciyaari doonaan horyaalka Premier League-ga kooxda Newcastle, laakiin Mourinho ayey ka dhigeysaa inuu u baahnaan doono in mudo intaa kasii fog uu sugo si uu u soo laabto Pogba.
Paul Pogba ayaa ka maqnaa Man United tan iyo kulankii UEFA Champions League ee FC Basel ee bishii September , taasoo sabab buuxa u noqotay in Man United uu ku yimaado hoos u dhac xoogan, gaar ahaan khadka dhexe, iyadoo dooqyada uu Jose Mourinho haatan u heysto khadkiisa dhexe ay yihiin xidigaha Marouane Fellaini, Ander Herrer iyo Nemanja Matic.
Dhinaca kale Mourinho ayaa helaya war aad u wanaagsan, kadib marka la xaqiijiyay in Phil Jones uu diyaar u yahay kulanka Newcastle ee sabtida soo aadan uu ku waramay waragayska Telegraph. Difaaca ree England ee Jones ayaa wuxuu dhaawaca uu haatan kasoo kabtay kasoo gaadhay inta lagu guda jiray kulankii xulalka England iyo Germany, laakiin xaaladiisa caafimaad ayaa la sheegayaa inay haatan 100% ay aad u wanagsan tahay.
Red Devils ayaa Isbuuca sabtida ka bilaamaya marti gelin doonta dhigeeda Newcastle, wuxuuna kulankan u yahay muhiim, maadaama ay ku adag tahay inay markale lumiyaan dhibco, kadib guuldaradii ay kala soo laabteen kooxda Chelsea kahor inta aanan la aadib kulamada caalamiga ah, xili ay haatan ka hooseeyaan 8 dhibcood hogaamiyaasha Man City.
Manchester United ayaa sugaya in uu xarunta tababarka kooxdiisa dib ugu wada helo ciyaartoyda Manchester United ka hor inta aanu si buuxda ugu diyaar garoobin kulanka uu Old Traffrod kaga hor iman doono macalinkii ay colaada wayni soo kala martay ee Rafa Benitez.
Si kastaba ha ahaatee, In Phil Jones uu taam buuxa u noqon doono kulanka Newcastle United ayaa muhiimad wayn u ah Jose Mourinho halka Paul Pogba aan garoomada lagula soo deg degi doonin si uu taam ahaansho buuxa u helo.